2 Ahene 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ahene Nhoma a Ɛto So Abien 2:1-25
Wɔde Elia faa ahum mu kɔe (1-18)
Odiyifo Elia ataade kodii Elisa hɔ (13, 14)
Elisa saa Yeriko nsu no yare (19-22)
Asisi kunkum mmarimaa a wofi Betel (23-25)
2 Bere a Yehowa rebɛfa Elia+ akɔ soro* wɔ ahum mu+ no, Elia ne Elisa+ fii Gilgal+ kɔe. 2 Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ: “Mesrɛ wo tena ha, na Yehowa asoma me sɛ menkɔ Betel.” Nanso Elisa kae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase na wo nso wote ase* yi, merennyae w’akyi di.” Enti wosian kɔɔ Betel.+ 3 Ɛnna adiyifo mma* a wɔwɔ Betel no baa Elisa nkyɛn bebisaa no sɛ: “Wunim sɛ ɛnnɛ Yehowa rebɛfa wo wura afi wo nkyɛn akɔ?”+ Na ɔkae sɛ: “Minim dedaw. Munnyae ho asɛm ka.” 4 Afei Elia ka kyerɛɛ no sɛ: “Elisa, mesrɛ wo tena ha, na Yehowa asoma me sɛ menkɔ Yeriko.”+ Nanso ɔkae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase na wo nso wote ase* yi, merennyae w’akyi di.” Enti wosiim kɔɔ Yeriko. 5 Ɛnna adiyifo mma a wɔwɔ Yeriko no baa Elisa nkyɛn bebisaa no sɛ: “Wunim sɛ ɛnnɛ Yehowa rebɛfa wo wura afi wo nkyɛn akɔ?” Na ɔkae sɛ: “Minim dedaw. Munnyae ho asɛm ka.” 6 Ɛnna Elia ka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo tena ha, na Yehowa asoma me sɛ menkɔ Yordan ano.” Nanso ɔkae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase na wo nso wote ase* yi, merennyae w’akyi di.” Enti wɔn baanu siim kɔe. 7 Wɔn baanu no kogyinaa Yordan ano, na adiyifo mma no mu 50 nso kogyinagyinaa akyiri hwɛɛ wɔn. 8 Ɛnna Elia yii n’ataade,*+ na ɔbobɔw de bɔɔ nsu no mu, na nsu no mu pae kɔɔ ha ne ha maa wɔn baanu no faa asaase kesee so twae.+ 9 Bere a wotwae ara pɛ na Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ: “Ka nea menyɛ mma wo ansa na wɔafa me afi wo nkyɛn.” Na Elisa kae sɛ: “Mesrɛ wo, wo honhom+ no menya kyɛfa* abien+ anaa?” 10 Ɛnna ɔkae sɛ: “Woabisa ade a ɛyɛ den. Sɛ wuhu sɛ wɔrefa me afi wo nkyɛn a, wubenya; sɛ woanhu de a, ɛnde worennya.” 11 Bere a wɔnam kwan so rekɔ a wɔrekasa no, mpofirim ara na ogya teaseɛnam ne ogya apɔnkɔ+ bɛtetew wɔn baanu ntam, na Elia faa ahum mu kɔɔ soro.*+ 12 Bere a Elisa gu so rehwɛ nea ɛrekɔ so no, ɔteɛɛm sɛ: “Me papa, me papa! Hwɛ, Israel ɔko teaseɛnam ne ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so!”+ Akyiri yi a onhu no bio no, osoo n’ankasa ataade mu na osuan mu abien.+ 13 Ɛno akyi no, ɔfaa Elia ataade*+ a afi ne ho agu fam no, na ɔsan kogyinaa Yordan ano. 14 Ɛnna ɔde Elia ataade* a efii ne ho guu fam no bɔɔ nsu no mu, na ɔkae sɛ: “Ɛhe na Yehowa, Elia Nyankopɔn no wɔ?” Bere a ɔde bɔɔ nsu no mu no, emu pae kɔɔ ha ne ha, na Elisa twae.+ 15 Bere a adiyifo mma a wɔwɔ Yeriko no huu no wɔ akyirikyiri no, wɔkae sɛ: “Elia honhom aba Elisa so.”+ Ɛnna wokohyiaa no, na wɔbɔɔ wɔn mu ase de wɔn anim butubutuw fam wɔ n’anim. 16 Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nkoa wɔ mmarima akantinka 50 wɔ ha. Yɛsrɛ wo, ma wɔnkɔhwehwɛ wo wura. Ebia Yehowa honhom* ama no so akɔto bepɔw bi so anaa obon bi mu.”+ Nanso ɔkae sɛ: “Monnsoma wɔn.” 17 Na wɔkae ara ma afei de na ɛhaw no, enti ɔkae sɛ: “Monsoma ɛ.” Ɛnna wɔsomaa mmarima 50 kɔe, na wɔkɔhwehwɛɛ no nnansa, nanso wɔanhu no. 18 Bere a wɔsan baa ne nkyɛn no, na ɔwɔ Yeriko.+ Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Manka ankyerɛ mo sɛ, ‘Monnkɔ’?” 19 Akyiri yi, kurow no mu mmarima bɛka kyerɛɛ Elisa sɛ: “Sɛnea me wura ani tua yi, kurow yi da baabi pa,+ nanso nsu no nye, na asaase no nsow aba.”* 20 Ɛnna ɔkae sɛ: “Momfa kankyee ketewa a ɛyɛ foforo na momfa nkyene ngu mu mmrɛ me.” Na wɔkɔfa brɛɛ no. 21 Afei ɔkɔɔ nsu no ti de nkyene koguu mu,+ na ɔkae sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Nsu yi, masa no yare. Ɛrenkum obiara bio, na ɛremma obiara nyɛ obonin bio.’”* 22 Elisa asɛm no baa mu, na nsu no anya ayaresa abesi nnɛ. 23 Ofii hɔ sɛ ɔrekɔ Betel, na bere a ɔnam kwan so no, mmarimaa bi fi kurow no mu bae, na wofii ase dii ne ho agoru+ kae sɛ: “Wo ti so a apa, fi ha kɔ! Wo ti so a apa, fi ha kɔ!” 24 Eduu baabi no, ɔdan n’ani hwɛɛ wɔn, na ɔdomee wɔn wɔ Yehowa din mu. Ɛnna asisi* abien+ fi wuram bɛtetew mmofra no bi mu; ná wɔyɛ 42.+ 25 Na ɔtoaa so koduu Karmel Bepɔw+ so, na ofii hɔ san kɔɔ Samaria.
^ Anaa “wim.”
^ Anaa “wo kra nso te ase.”
^ Sɛ wɔka sɛ “adiyifo mma” a, ɛbɛyɛ sɛ ɛkyerɛ adesuakuw a wɔtete adiyifo wom anaa adiyifo nkabom kuw.
^ Anaa “ewim.”
^ Anaa “diyifo ataade.”
^ Anaa “mframa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “asaase no ma nyinsɛn sɛe.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɛremma obiara nyinsɛn nsɛe bio.”
^ Nt., “asisibere.”